Natural Henna Tattoos: Zvidimbu Unogona Kuzvigadzirira | Kunyora
Natural henna tattoos: zvidimbu zvaunogona kuzviitira
Nat Cherry | | Mhando dzematatoo
ari henna nyora zvakasikwa inzira inonakidza kwazvo kana iwe uchida kushandisa masikati kushongedza ganda rako Pasina mimwe mhedzisiro pane kupedza mazuva mashoma nemagadzirirwo awakashongedza nawo ganda rako.
Saka, henna nyora zvakasarudzika sarudzo inonakidza inosanganisa fungidziro yako neimwe yemaitiro ekare e tattoo.
1 Chii chandingashandise sehena?
2 Uye gare gare?
Chii chandingashandise sehena?
Iwe unogona kusarudza kutenga iyo henna, kunyangwe paine sarudzo dzakachipa, senge kuzviita iwe pachako. Hazvina kuoma, sezvo iwe uchingoda ndimu, shuga, yakakosha mafuta uye henna upfu.
Zvinokurudzirwa kuti, kuti uwane mhando yemasikirwo ehena henna, unosarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kunyanya kana zvasvika pakutora upfu hwehena. Sarudza mhando dzemhando uye yeuka kuti henna yebvudzi inowanzo kuve neyakaipisisa mhando kupfuura henna yeganda.
Kune akawanda maresipi pamhepo anogona kukupa iwe chete yakaenzana huwandu hwezvigadzirwa. Iwe unogona kusarudza iyo inokodzera zvakanyanya zvaunofarira (kana izvo zvaunosungirirwa kutenderedza firiji).
Uye gare gare?
Kugadzirira zvakasikwa henna nyora zviri nyore, kunyangwe iwe uchifanirwa kuve nekufanoona. Kutanga iwe uchafanirwa kusanganisa zvinongedzo zveresipi yawakasarudza mundiro diki. Ipapo uchafanirwa kuvhara mbiya nepurasitiki. Inofanira kubata pamusoro kuitira kuti parege kubuda webhu inosangana nemhepo. Ipapo ngazvigare munzvimbo inodziya kwemaawa makumi maviri nemana.
Paunenge uinayo, unogona kuzadza plastiki henna koni nemusanganiswa uye wotanga kushongedza ganda rako. Iwo maTattoo anogara angangoita mavhiki maviri. Kana uine cream yakasara, iwe unogona kuimisa uye ichagara kwemwedzi mishoma.
Isu tinovimba isu takupa iwe inonakidza pfungwa kuti ugadzire yako yakasikwa henna dhizaini uye maatatoo. Tiudze, wakambowana matatoo seaya here? Iwe unayo chero zano rekupa? Rangarira kuti iwe unogona kutiudza izvo zvaunoda kana iwe ukasiya isu mhinduro!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Natural henna tattoos: zvidimbu zvaunogona kuzviitira
Marbella Tattoo Kokorodzano 2019, zvese zvakagadzirira
Mavara mukati memuromo, yekupedzisira yakanyanyisa kukumbira?